'नमरी स्वर्ग देखिन्‍न भन्नेहरू इलाम पुगेका रहेनछन्' - Nayabulanda.com
ब्रजेश खनाल ११ आश्विन २०७६, शनिबार २०:५१ 303 पटक हेरिएको
असोज ५ गते, इलाम
‘अब यहाँदेखि चाहिँ पिच बाटो सकियो,’ कवि बिमल वैद्यले मोटरसाइकल घ्याच्च रोक्दै भने।
हुन त म धेरै वर्ष अघि ‘मंगोलियन हार्ट’को एउटा म्यूजिक भिडिओ बनाउने क्रममा दार्जिलिङ जाँदा कन्याम, फिक्कल र पशुपतिनगर पुगेको थिएँ। ‘तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको।’ तर त्यति बेला इलाम बजार जाने अवसर जुरेन। त्यसको केही समयपछि ‘नेपथ्य’को सिलोंगमा भएको कन्सर्ट र मैले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम ‘म्यूजिक म्याजिक’को छायांकनपछि फर्किँदा साथीहरुसँग इलाम पनि घुम्ने योजना बनेको थियो। त्यस पटक पनि चेरापुञ्जीमा खुट्टा मर्काएको हुनाले म भद्रपुरबाट उडेर काठमाडौं आउनु परेको थियो।
साथीहरूले पछि इलामका फोटा देखाउँदा म चुक्चुकाएको थिएँ। इलाम टेक्ने अवसर नै जुर्दैन थियो। यस पटक बिमल वैद्यले त्यो जुराइदिए, ‘इलाम साहित्य महोत्सव’मा सहभागी हुने अवसरका रुपमा।
कोहीकोही मान्छे एकै भेटमा आत्मीय हुन्छन्। केही महिनाअघि सिलिगुडीमा सम्पन्न ‘दार्जिलिङ नेपाल साहित्य महोत्सव’मा भेटिएर परिचय भएका कवि बिमल त्यसको उदाहरण हुन्। त्यहाँ हाम्रो खासै उठबस हुन नपाए पनि एउटा अनौठो र अदृश्य धागोले हामीलाई बाँधेको रहेछ। बीचमा एक पटक उनी काम विशेषले काठमाडौं आएका बेला आगो लिन जसरी भेटेर कफी खाएका थियौं। ह्वाट्सएप्मा बेलाबेला छास्सछुस्स संवाद हुन्थ्यो।
त्यही क्रममा उनले इलाममा हुन लागेको साहित्य महोत्सवको निम्तो दिएका थिए। उनको निम्तो पाउनासाथ मन इलाम पुगिहाल्यो। इलामको सुन्दरताबारे सुनेर लोभिइरहेको मन फुरुंग भएर बादलको भुवा बनेर उड्नु अनौठो कुरा भएन। मनभन्दा छिटो यात्रा गर्ने कुनै कुरा कहाँ छ र? मानिसहरू प्रकाशको कुरा गर्छन्। मन त एकै निमेषमा अरबौं प्रकाशवर्षको गतिमा यात्रा गर्छ। मानिसहरू ‘टाइम ट्राभल’लाई मिथक भन्छन्, मन भने आँखा झिमिक्क नगर्दै इतिहासको पहिलो घटनाबाट भविष्यको अन्तिम पलसम्म पुग्न भ्याउँछ।
अप्ठ्यारो मान्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पनि यहाँ नभएकोले अरु केही बन्दोवस्त छैन। राम्ररी खुवाउन सकेनौं, अन्यथा नलिनु होला।’
मैले त्यतिखेर अग्निपथ भन्ने हिन्दी सिनेमामा अमिताभ बच्चनले बोलेको एउटा संवाद सम्झिएँ, ‘आदमीका भूख रोटी से नहीं भरता। भूख मरता है रोटी में लिपटी हुई प्यार से। मालूम?’
हवाइ सेवाको गौरवशाली परम्परा कायमै रहेको कारण भनेको समयभन्दा निकै ढिला सबै जना एकै ठाउँमा भेला हुन सकियो। साढे चार नाघिसकेपछि मात्र हामी झापाबाट इलामतिर लाग्यौं। झापाको हप्प परेको गर्मी बर्नेको उकालोमा कोल्बुङसम्म हामीलाई पुर्‍याउन आयो र इलामको चिसोसँग ‘पल्टी मारेर’ बिदा माग्दै फर्कियो। (यात्रुहरूलाई गन्तव्यको बीचमै ओरालेर अर्को गाडीको जिम्मा लगाउनुलाई यातायात व्यवसायीहरू पल्टी मार्नु भन्दा रहेछन्।)
वरिष्ठ कवि र साहित्यकारहरूको सान्निध्यमा रमाउँदै फिक्कल र कन्याम हुँदै अघि बढ्दा म पन्ध्र–सोह्र वर्ष अघिका सम्झनाहरूमा रमाइरहेको थिएँं। इलाम पुग्ने आधा बाटो छिचोलिई सकेको थियो। अब मलाई भने करफोकमा ओर्लनु थियो।
काठमाडौंमा तीन दशकभन्दा बढी बिताएर सात वर्षअघि आफ्नै थलोमा फर्केका प्रिय दाइ केदार शर्माका घरमा मलाई बास बस्नु थियो। केदार दाइ र म भोलिपल्ट बिहानै सँगै साहित्य महोत्सवका लागि इलाम पुग्ने योजना बनेको थियो। उनले एउटा सानो तर न्यानो होमस्टे पनि चलाएका छन्। केदार दाइ दम्पत्ति आजकल देशभरका स्थानीय परिकार र तिनको आफ्नोपन खोज्दै खाद्य संस्कारको जगेर्ना गर्न मेची-महाकाली भौंतारिन पल्केका छन्। ‘लोक-परिकार’ भन्ने नाम दिएर उनले तिनकाबारे निरन्तर कलम पनि चलाइरहेका छन्।
माथि टुप्पोमा पुगेपछि केदार दाइ भेटिए। त्यहाँबाट फेरि हामी केहीबेर बारीका कान्लैकान्ला तेर्सो हिँडेर माटो ताछेर बनाइएका दश-बाह्र खुड्किला ओर्लेर उनको घरमा पुग्यौं। भित्र पस्नासाथ किरण भाउजूको उज्यालो र स्नेहिल मुस्कानले बाटोभरिको सबै थकाइ भगाइदियो।
त्यही बेला काठमाडौंबाट एक प्रिय मित्र, पदयात्राविद्, चित्रकार तथा अनुवादक सुरज शाक्यको सन्देश मोबाइलमा प्राप्त भयो, ‘केदार दाइलाई जसरी भए पनि फकाएर चियाको धुँवाले सेकाएको कुखुरा चाहिँ चाख्नु होला है?’
मैले मुसुक्क हाँस्दै उत्तर पठाएँ, ‘सोह्रश्राद्धको बेला छ। सबै बाहुन कहाँ म जस्तो बिग्रेका हुन्छन् र?’
लोभी जिब्रोको रसायन त सुरजले सक्रिय बनाइदिसकेका थिए। मैले एउटा षड्यन्त्र गरेँ, सुरजसितको त्यो वार्ता दाइ-भाउजूलाई सुनाएँ। फर्किँदा एक रात फेरि त्यहाँ बस्ने हो भने चिया धुँवाएको कुखुरा खुवाउने वचन पाएँ। म जस्तो खञ्चुवाको लागि त्यो त गज्जबको कुरा भइहाल्यो। दुई पटक पनि नसोची मैले हुन्छ भनिहालेँ।
हुन त त्यस रात हामीसँग धेरै समय थिएन। तै पनि दाइको हल्काफुल्का सहयोगका साथ भाउजूले बनाएको खाना उहाँहरूको आत्मीयता जत्तिकै स्वादिलो थियो। खैरो चामलको भात, गट्टाको तरकारी, करेला भुटेका तरकारी र गुन्द्रुकको झोल। साथमा साग हालेको कडी।
लोक-परिकारका पारखी दाइले गफ दिए, ‘हेर, यो कडी देशैभर खाइन्छ। यता पूर्वमा हामी सोल्लर भन्छौं, सुदुरपश्चिममा पलेउ भन्छन् र अन्त धेरैतिर कडी। यो चाहिँ सुप पाराले साग हालेर बनाएको पलेउ हो, हामीले भोजन भ्रमणमा सिकेको। यसमा हालेको साग जरिङ्गोको हो।’
अनि टेबलमा थियो प्रशस्त लसुन फुराइएको, तात्तातो घिउ। दाइले थपे, ‘यो चाहिँ मेरा हजुरबाले खाने खालको घिउ। उहाँ यसरी टन्नै लसुन फुराएरको घिउले सर्दी जान्छ भन्नुहुन्थ्यो।’
मैले सोचेँ, सर्दी त के गर्छ कुन्नि, त्यो घिउले पाहुनालाई चाहिँ नजाऊँ-नजाऊँ पार्दो रहेछ। अँ, घरमै बनाएको ‘जिन्जर एल’को स्वाद त अझै जिब्रोमै छ। त्यसलाई उनीहरू ‘अदुवाह्’ भन्दा रहेछन्। वाह नै थियो त्यसको स्वाद।
सहन नसकेर केदार दाइले भने, ‘भाइ, आवाज अलि सानो बनाऊ न।’
चालकले नसुनेको जस्तो गरे। केदार दाइ किन छोड्थे, राहू जसरी पछि लागिरहे। धेरै पटक कचकच गरेपछि चालकले मुर्मुरिँदै गीत बन्दै गरिदिए। हाम्रो कान तै पनि र्‍वाइँ-र्‍वाइँ गरिरहेको थियो।
चालकले गीत सुन्न नपाएको तोडमा हामीसँग बदला लिए जसरी अचानक गाडीको गति बढाए। उनी खाल्डाखुल्डीमा पनि ग्वाम्मै गाडी हालेर उफारिदिन्थे। साहूको गाडी राहूको ज्यान !
त्यति साँघुरो र घुमाउरो बाटोमा दायाँबायाँ हल्लाउँदै हुइँक्याउँदा ठाउँठाउँमा त जस्तै नास्तिकले पनि इश्वरको नाम नपुकारी बस्न सक्दैन थियो। सम्भवतः त्यति बेला हामी सबैको आन्द्रा र भुँडीले स्थानान्तरण गरिसकेको हुनुपर्छ। सम्भवतः त्यही कारण विदेशका कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक सवारी चलाउनेहरूको उमेर पैंतीस वर्ष हुनैपर्ने नियम हुन्छ। उनीहरू अलि जिम्मेवार हुन्छन् भनेर होला। जे होस्, ती चालक भाइले हामीलाई इलाम चाहिँ पुर्‍याए।
इलामको ‘चप्पाचप्पा’ नघुमाइ पठाउन्न भन्ने हठ लिएर बिमल वैद्यले मलाई त्यहाँका सबै हेर्नपर्ने ठाउँ पुर्‍याए, चखाउनुपर्ने कुरा चखाए। त्यही क्रममा हामी उनको मोटरसाइकलमा माइपोखरीतिर लागिरहेका थियौं।
तै पनि मैले शंका प्रकट गर्दै भनेँ, ‘टाढै छ जस्तो छ अझै। फर्किँदा अँध्यारो पनि होला। कि यतैबाट फर्कौं?’
उनले भने, ‘ह्या….ढुक्क हुनुस् न। जसरी पनि पुर्‍याउँछु म। पाँच मिनेटमा पुगिन्छ।’
बिमलले थक्कथक्क मान्दै भने, ‘मौसमले अलि धोका दियो।’
मैले भनेँ, ‘यस रुपमा माइपोखरी देख्न पाउनु पनि त अर्कै रमाइलो हो नि।’
साँच्चै कुहिरोको अँगालोमा लुकेर लजाइरहेको माइ पोखरी झलमल्ल उज्यालोमा सायद त्यति आकर्षक देखिँदैन थियो होला।
पोखरीको वरिपरि एक चक्कर लगाएर हामी भटभटे राखेको ठाउँमा फर्कियौं। त्यहाँ स्थानीय एक शेर्पाको पसलमा दुर्लभ जिनिस पाइने रहेछ, पदमचाल भन्ने जडीबुटीको जराबाट बनेको टिन्चु पानी। स्वास्थ्यवर्धक पनि हुने त्यो तरल पदार्थ अलिकति चाख्ने मौका पाइयो, छोड्ने कुरै भएन। मैले अलिकति घुट्क्याएँ। भटभटे चलाउने भएकाले बिमलले चाहिँ मलाई हेर्दै घुटुघुटु थुक मात्र निले। साथमा उच्च रक्तचापलाई फाइदा हुने नकिमा भन्ने फूलजस्तो वनस्पतिको तरकारी र सुकुटी चपाइयो।
हामी अँध्यारोमा ओरालो बाटो झर्न थाल्यौं। बाटो अझै बढी चिप्लो र हिलो भएको थियो। बेलाबेला म कतै ओर्लिनुपर्छ कि भनेर सोध्थेँ। आफैं पनि भटभटे चलाउन भएकोले पछाडि बस्नेले यो प्रश्न कहिल्यै गर्न हुन्न भन्ने थाहा छ। इगोमै हान्छ ढ्याङ्ग। उनलाई पनि त्यस्तै किन नहोस्। ‘पर्दैन’ भन्दै सम्पूर्ण दक्षताको प्रदर्शन गर्दै उनले हामी दुबैलाई सग्लो र एक टुक्रामै इलाम ल्याइ पुर्‍याए।
रजनी भाउजूले सन्तोकको सास फेर्दै भनिन्, ‘फोन पनि लागेन, पीर लागिरहेको थियो।’
बिहानै वरिपरिका रहेसहेका भालुढुंगा, भ्यू टावर, लभर्स प्वाइण्ट र चिया बगानहरू घुमाइसकेपछि मासुभात खुवाएर वैद्य दम्पत्तिले मलाई करफोक जाने गाडी चढाइदिए। त्यस दिन केदार दाइले पशुपतिनगर फाटकसम्म घुमाए। फाटकपारि गएर हामीले ठट्टा गर्‍यौं, ‘लौ विदेश भ्रमण पनि भयो।’
नभन्दै ‘टी स्मोक्ड चिकन’को स्वाद अद्वितीय नै थियो। मैले त्यही भनेँ। केदार दाइ गमक्क परे र भने, ‘आज हतारमा बनाएकोले अझ भनेको जस्तो भएको छैन।’
यो सामग्री इलामको प्रचारप्रसारका लागि सेतोपाटी डटकमबाट साभार गरेर पुनप्रकाशित गरेका हौं